မှတ်ဉာဏ်ပြန်ကောင်းစေမည့် အချက် 8 ချက် | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
5. သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနှင့် ကျား၊ မ ဟော်မုန်းပမာဏကို အမြဲဆန်းစစ်ပါ။
6. ပြဒါးဓာတ်နှင့် သတ္ထုဓာတ်များ ကင်းဝေးပါစေ။
8. ညအိပ်ချိန်စုစုပေါင်း 8 နာရီအိပ်ပါ။